Dabaq Type B – 2 Biyaano – Salaam Prorperties
Home Dabaq Type B – 2 Biyaano
Dabaq Type B – 2 Biyaano
dabaqan wuxuu ka koobanyahay 2 biyaano. Biyaanada hoose wuxuu leeyahay 2 qol jiif, fadhi, qado, jiko, 2 musqulood, barando, garaash gali 2 gaari iyo 2jardiin. Waxaa dheeraad ah 2 qol iyo masqul (service)-ka ah oo loogu talagalay shaqaalaha guriga ka adeegaya.
Biyaanada kore wuxuu leeyahay 4 qol jiif oo mid ka mid leeyahay musqul. Wuxuu sidoo kale leeyahay hall iyo balkoon. Guud ahaa dabaqa cabirkiisu biyaanada kore iyo midda hoose waa (30*20) oo u dhigantan 600 mitir isku wareeg.
Garaash 2 gaari
Qol Fadhi 7X6
Qolka Cuntada 4.3X3.5
Famili hall 4X4
Qol suuli leh 5X5
2 Jardiin 6X5
2 qol Service 4X2.5
Darusalaam City, Banaadir Somalia
Mogadishu, Darusalaam City, Somalia
Villa Diamond – 3 qol